Semalt: 10 Uninzi lweeWebhu zoLwazi eziLwaziweyo zokuSusa iDatha yeDatha
Ukuba ufuna ukukhipha idatha kwiindawo ezininzi ozikhethayo kwaye iprojekthi yophando ngokukhawuleza, ukuba i-web scraping zixhobo ziya kunceda ukukhipha idatha ekhompyutheni ngaphandle kwayo. Zilula ukusebenzisa kwaye ziza kunye nezindlela ezingcono kunye nezibonelelo ezingaphezulu kwezinye iinkqubo ezifanayo. Ezi zixhobo zenzelwe ukukhupha ulwazi olufanelekileyo ngokukhawuleza, ukugcina ixesha elininzi kunye namandla abasebenzisi.
Masikuxelele apha ukuba ezinye zezi nkqubo zikhululekile xa ezinye zifika kwiingqungquthela zombini kunye neenguqu ezingakhokhelwa. Uya kufuneka ufumane isicwangciso seprayimm emva kokuba ixesha lesilingo liphelile:
Ukungenisa i-Import.io kuyaziwa ngokubhekiselele kwikhompyutha kunye nobuchule obuphezulu Inkqubo yabaphuhlisi bewebhu kunye nabaqeqeshi beengcali. Inokukunceda ukufikelela kwedatha kumaphepha athile ewebhu kunye nokuthumela ngaphandle kwiifayile ze-CSV kwimizuzu. Amakhulu ukuya kumawaka ewebhusayithi angacatshulwa ngaphandle kokubhala nawuphi na umgca wekhowudi, kwaye i-Import.io izakudala i-APIs i-1000 njengemfuno zakho.
Dexi.io, ebizwa ngokuba yi-CloudScrape, iya kukunceda ufumane idatha echanileyo kunye nehleliweyo phakathi kwemizuzwana embalwa. Awudingi ukukhuphela le nkqubo njengoDexi.io ngumhleli wesiphequluli kunye ne-web scraper engagqithisi kuphela iziza zakho kodwa iyakhupha okanye ikhuphe ngokufanelekileyo. Iqokelela kwaye igcina idatha kwiBhokisi.net kunye ne-Google Drayivu kwaye ithumela ngaphandle kwi-JSON ne-CSV.
I-Webhouse..Ngenye enye i-web-scraper-based web scraper kunye nesicelo esicoca kunye nokucoca iiwebhusayithi zakho nge-API enye. Inokukhipha idatha kwiilwimi ezingaphezu kwezi-240 kwaye ixhasa ifomati njenge-RSS, i-XML kunye ne-JSON.
I-Scrapinghub yinkqubo ye-scraping ye-web-based and data extractor. Isebenzisa i-rotator proxy enamandla, eyaziwa ngokuba yi-Crawlera. I-bots yayo yokunciphisa izakukunceda ulandele indawo yakho kwiinjongo zokukhangela kwaye uza kuwukhulula kwi-bots eyingozi. Isicwangciso seprayimenti siya kukuhlawula i-$ 25 ngenyanga ngelixa inkolelo yalo yamahhala ihamba nenani elilinganiselweyo leempawu.
5. I-Visual Scraper:
I-Visual Scraper yinkcazo yedatha ebanzi kwaye enegunya elikwazi ukucwangcisa iiwebhsayithi ezininzi kunye neeblogi kubasebenzisi, kwaye iziphumo zifakwe ngaphakathi kwemizuzwana emibini. Ungayifumana kamva idatha yakho kwifom yeXML, JSON, CSV, kunye ne-SQL.
6. I-Hub yokukhangela:
I-Hub yokukhangela iyisongezelelo esiluncedo kunye ne-Firefox esenza lula ukukhangela i-web ngenxa yezixhobo zayo zokudatshulwa kwedatha. Unokuphequlula ngokuzenzekelayo kumaphepha ewebhu kwaye unokufumana idatha efunwayo kwiifom ezininzi.
I-scraper iyayaziwa kakhulu ngokusebenzisana kwayo kunye nokuthumela ngaphandle kwedatha yakho ekhishiwe kwi-spreadsheets ze-Google. Yinkqubo yamahhala engasetyenziselwa zombini ngokuqaliswa kunye neengcali. Kufuneka ukopize idatha kwi-clipboard yayo kwaye vumela inkqubo yeCraper for you.
Le yomelele kwaye iguquguqukayo yewebhu kunye ne-data extractor engakwazi ukufumana umgangatho wedatha yakho ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Isebenza ngokukhawuleza kwaye ilandele idatha efunwayo kwiminitha emihlanu ukuya kwishumi. Okwamanje isetyenziswe ngamashishini afana ne-PayPal, MailChimp kunye nabanye.
Nge-Spinn3r, kulula kakhulu ukutshintshela idatha yonke kwiisayithi zobuchwepheshe, amanxibelelwano eendaba zentlalo, ukutya kwe-RSS, ukutya kwe-ATOM kunye neentengiso zeendaba. Inika iziphumo ezifunwayo kwifom yeefayile ze-JSON.